Hesorin'i Chrome ireo safidy Hanidy ny kiheba rehetra ary ny kiheba Close eo ankavanana | Vaovao momba ny gadget
Hesorin'i Chrome ireo safidy Hanidy ny kiheba rehetra ary ny kiheba akaiky eo ankavanana
Rehefa tsy maintsy mitady ny vidiny amin'ny Internet isika, dia azo inoana fa rehefa mandeha ny minitra dia feno kiheba, takelaka manome antsika fampahalalana samihafa ampitahaina amin'ny hafa isika. Indraindray, rehefa efa nahita sy nampitaha ny fampahalalana ilaina izahay, ary te hanomboka fikarohana vaovao, afaka mandeha amin'ny takelaka fanakatonana azy ireo isika, manidy ny browser ary manokatra azy io indray na manao ny iray amin'ireo safidy mahafinaritra atolotry ny mpitety anay. amin'ny alàlan'ny kiheba: Akatony ireo takelaka hafa, izay mamela antsika hanidy ny vakizoro rehetra afa-tsy ilay misy antsika ary Akatona ny takelaka eo ankavanana, safidy izay manidy ny kiheba rehetra izay eo ankavanan'ny toerana misy antsika.
Ireto safidy ireto dia tsara hanakatonana takelaka haingana. Rehefa te-misintona horonantsary isika na mikaroka karazana atiny hafa voaaro amin'ny zon'ny mpamorona dia azo inoana fa ny dokam-barotra mahafaly dia tsy mijanona manokatra tabilao vaovao, izay lasa manahirana rehefa manidy azy ireo, fa Noho ireo safidy ireo dia afaka manao azy haingana isika ary manohy ny fikarohana.
Saingy toa nifanaraka tamin'ny androny ireo safidy mahafinaritra ireo, satria raha ny filazan'ny mpampiasa Reddit, misy porofo ao amin'ny tetikasa Chromium, miadidy ny fampandrosoana ny Chrome, fa nikasa ny hanafoana ireo safidy ireo ireo injeniera amin'ny alàlan'ny fanesorana azy ireo amin'ny menus ny kiheba. Tsy vaovao io hevitra io, nanomboka Toa nanomboka tamin'ny 2015 izy io. Indray mandeha indray, ny antontan'isa momba ny fampiasana ireo safidy ireo dia ho tompon'andraikitra amin'ny famongorana azy ireo, satria 6% amin'ireo mpampiasa ihany no mampiasa ny safidy Close tabs eo ankavanana ary 2% ihany no manidy ireo takelaka hafa.
Ho fanampin'izay, raha ny filazan'ny mpamolavola, anio misy safidy maro azo alaina ao amin'ny menus kiheba, izay mety hiteraka fisafotofotoana ho an'ireo mpampiasa. Soa ihany, Firefox, izay manolotra ireo fiasa ireo, dia tsy mikasa ny hanafoana azy ireo, noho izany dia tena azo inoana fa ny isan-jaton'ny mpampiasa mampiasa ireo safidy ireo dia hiova amin'ny tranokala Mozilla Foundation.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Hesorin'i Chrome ireo safidy Hanidy ny kiheba rehetra ary ny kiheba akaiky eo ankavanana
Fanavaozana Instagram momba ny fiarovana
130 tapitrisa dolara ho an'ny ady atao amin'ny SIDA noho ny mena (PRODUCT) RED